Brand Segmentation Alignment yeMakambani Kugadziridza
Optimized Kushambadzira: Nei Uchifanira Kuenderana Brand Chikamu Sekuita & Kuzivisa
China, June 19, 2014 Mutongi Graham
Iine yakawanda mavhoriyamu e data akagadzirwa munzira dzakawanda dzekutengesa, mabhureki anopikiswa kuronga nekushandira iro rakakodzera data rezvinhu kuti riwedzere kuyambuka-chiteshi kuita. Kuti unzwisise zvirinani vateereri vako, tyaira yakawanda kutengesa, uye udzikise kushambadzira marara, unofanirwa fambisa chikamu chako chechikamu nedhijitari activation uye kubika.
Iwe unofanirwa kuenzanisa iyo sei vanotenga ne ani iyo inotenga (chikamu chevateereri) kune iyo chii (ruzivo) uye sei (digital activation) kuitira kuti zvese zvaunoedza kuita zvive pa peji rimwe chete.
Chikonzero chakakosha cheiyi kurongeka ndechekuwedzera kushanda zvakanaka uye kuwiriranisa zvaunoedza kuitira kuti chinhu chimwe nechimwe chirikushanda pamwe chete nechimwe. Kuziva vateereri kutariswa kunoona kuti ndeapi matanho ekushambadzira aunofanirwa kushandisa kuzviita, izvo zvinokutungamira kunzwisisiro chaiyo yekuvandudza chikamu chako. Iko kutenderera kunoenderana uye kufananidza.
Chikamu chinotungamira zano rako
Segmentation iri kuve nechokwadi chekuti chaiyo meseji -> inosvika kune chaicho mutengi -> panguva chaiyo. Ichowo chihombe zvikuru zvakanyanya zvine hupfumi kupfuura kushambadzira kwakawanda. Nekugovanisa vashandisi vanoita zvine mutsindo iwe uchawedzera kubatirana nevashandisi vemazuva ano kutyaira huwandu kubva kune vateereri vako. Kugadzirisa yako segmentation neiyo activation zano ndiyo kiyi.
Nekuwana kunzwisiswa kwehunhu hwevatengi iwe une iyo inzwisisiro inodiwa kuwedzera shanduko. Segmentation chishandiso chinokubatsira iwe kuongorora huwandu hwevatengi vanogovana zvakafanana maitiro.
Nekunangisa zvikamu zvine hunyanzvi hwekuita, iwe unogona kugadzira nzira inoshanda yekutengesa iyo inoshumira zvirinani zvinodiwa nevatengi uye pakupedzisira inosimudzira kutendeuka.
Zvinhu zvishanu zvezvikamu zvinonyanya kushanda zvinofanirwa kuve
Zvinonzwisisika - zvichibva pahukuru, simba rekutenga, uye chikamu chikamu
Zvakakosha - yehuremu hwakakomba hunobatsira
Zvinowanikwa - imwe inogona kusvika nyore
Kusiyanisa - rakasiyana nevamwe
Actionable - iyo inogonesa anoshanda mapurogiramu / macampaign ekugadzirwa
Kugovanisa misika nemazvo, unofanirwa kuigovanisa mumapoka akasarudzika ane zvido, hunhu, kana hunhu hunoda zvigadzirwa zvakasiyana kana musanganiswa wekushambadzira. Iyo kiyi yekumisikidza zvikamu zvevateereri zvawakaona pane rese dhijitari ecosystem.
Chikamu chako chakanangwa chinofanirwa kuitwa pahwaro hwe
Ndeapi vatengi vanozopindura zvakanaka kune yako maraki (s)
Izvo zvinonyanya kutarisa zvinodiwa nemutengi uye zvinokurudzira
Iko vatengi vari mukutenga kutenderera
Hunhu hunokwanisika hunobatanidza maKPIs senge saizi uye chikamu chemusika
Kurerukirwa kwevanhu (chimiro) chitupa
Kugoneka mukutarisa (zvichibva pamari, zviwanikwa, uye kufunga kunoshanda) uye kukura kunoenderana kwechikamu
Iwe unofanirwa kunzwisisa maitiro ekutenga echikamu chimwe nechimwe uye kukudziridza chimiro chevatengi (kuburikidza neongororo uye kuteedzera kwewebhu data akapfuma).
Iwe unofanirwa kutanga neiyo brand brand DNA kuongorora kusimba / kushaya simba kwechiratidzo
Chikamu chekuona mapoka ekuvavarira kuti atarise paari
Ziva zvinangwa zvekutanga uye zvechipiri
Gadzira chinzvimbo chinomira
Ita kuti chinangwa chienderane nechiratidzo nenzira ine chinangwa
Paunenge watoita akaparadzanisa vateereri vako, iwe unofanirwa kunge uchitsvaga vanokurudzira, mamishinari echiratidzo, evhangeri, nevamiriri. Uchishandisa vanhu ava kana mapoka, iwe unogona kuwedzera kugona kweiyo brand activation uye kuwedzera mamitero ekupindura.
Segmentation inotyaira inoshanda inoshanda
Kugadzirisa kugona kwemhando yepamusoro uye kuzadzisa / kuchengetedza yako yemakwikwi mukana uye kuwedzera shanduko, iwe unofanirwa kuenzanisa chikamu chesaiti, mameseji, uye kumisikidza.
Kubudirira kupatsanura zita rako uye kurimisa pamwe nekuwedzera kwekuwedzera.
Pamusoro pekuziva kwepfungwa
Kugadzira kushandisa yako CRM uye yechitatu-bato dhata sosi, iwe unogona kugovera vateereri vako uye kubatsira kuronga mashandiro. Nekutsanangudza vatengi vako vakanakisa, unogona kutarisa kune akanakisa midhiya kuti usvike kwavari uye neshoko rakanakisa rekuita navo.
Paunenge uchironga zviitiko zvako zvekushambadzira iwe unofanirwa kuchengeta chikamu mupfungwa kuti iwe ugone kuona kuti ndezvipi zvinhu zvekuisa mumushambadziro wako wekushambadzira. Iko kusanganisa chaiko kwekushambadzira zviitiko uye mota zvakabatana zvakanyanya nehunhu hwevateereri.
Chikamu chemusika uye kuvaka musiyano wekukosha kukosha ndeemaviri ekushambadza ane simba maturusi ekutungamira zano rekushambadzira. Iyo inoratidza zvakajeka kuti ndeapi mutengi tarisiro ichaunza iyo yakanyanya kudzoka mukutendeuka uye inopa maonero ari nani ekuti ungasvike sei nekuvabata.
Paunenge iwe watora chikamu, iwe unogona kuenzanisa pamwe nekumisikidza. Kuitwa kweBrand kunosanganisira kuunza marita kumusika. Izvo ndezve kuburitsa brand kukura nekushandisa ese chiteshi mikana yekubatana nevatengi uye kudzamisa kwavo zviitiko / hukama neako brand. Unofanira ku:
Chinja marongero emhando muzvirongwa zvezviitiko zvitsva
Gadzira padhuze pamusika kubatana nevatengi
Shandisai mapurogiramu ekugadzirisa vatengi
Dhiraivha chiratidzo kuoneka uye chiteshi kuvapo
Tarisa zvirikuitika mumusika uye nemhando yekushanda
Kugadzira kushushikana kana kufunga zvine hungwaru pakati pevatengi neako brand kusimudzira kubatanidzwa kwakakosha. Izvi zvinoenderana nemabatiro aunoita maitiro uye maitiro maererano nekambani yako.
Kuzivisa kweBrand kunokupa nzwisiso iri nani muchikamu
Kumhan'ara kwakanangana nechikamu kunobatsira kupa iwo ruzivo rwunodiwa kuzivisa maitiro ekushambadzira uye kutungamira kusimudzira mushandirapamwe.
Kugadzirisa zvikamu mukumhan'ara, zvinokutendera kuti uone kuti ndezvipi zvikamu zvinonyanya kubatsira kuitira kuti iwe ugone kuwedzera kunanga kwekuita. Iri zano rinokupa iwe nemufananidzo wakanyatsojeka wekuti zvikamu zvega zvega zvinopa yako ROI, izvo zvinoda kutarisirwa kwakanyanya uye zvimwe zviwanikwa, uye zvekubvisa.
Kugadziriswa kwakaenzana optimization
Kukwikwidza kwako kunoenderana nekuti iwe uwane vateereri chaivo vezvigadzirwa / masevhisi, wozowana iwo meseji chaiyo kwavari.
Segmentation chishandiso chekubatsira kuita izvi, asi kunze kwekunge yakanangwa nemusanganiswa wekushambadzira, urikutambisa kugona uye kucheka mumahara ako. Chitoro chakakura che data chauinacho chinofanirwa kushandiswa kuona vese vaunotaura navo uye kuti ungasvike sei navo nemazvo kutyaira kubatikana. Paunenge uine inowirirana segmentation kune optimization, uye akaiswa pane zvakaenzanirana kumhan'ara kuti uwane ruzivo, ipapo iwe pakupedzisira unowana ruzivo rwaunoda kuti ugare uchigadzirisa shanduko.
Tags: vatsigirikuenzanisakuzivadhidhi databrand ambassadorsmuchiso chidimbucompetitive advantagekutendeukamuchinjiko-chiteshikushandiswa kwedhijitarikutyaira kutengesakunyatsoshandavafundisiwedzera kutendeukaInfluencerskufananaMarketingKushambadzira kuitaoptimizationoptimized kushambadziratengakuderedza mararazvikamu
Zvakakodzera kuti Mutongi ave mutungamiriri we Sq1, sezvo anga ari panotungamira bhizimusi kumucheto wedhijitari basa rake rese. Asati ajoina Sq1, aive mubatanidzwa uye CEO weimwe yemasangano akabudirira kwazvo edhijitari muTexas. Mutongi akabatsira yake yedhijitari agency kukura yayo mutengi roster kuisa makambani anozivikanwa seAmerican Airlines, Mountain Dew, Pier 1 Imports, Dillard's uye Radio Shack. Mudiki pane vese anowana mubairo weComdex we "Bhizinesi Diki reGore", (imwe yemitambo mikuru yekutengeserana uye kufumurwa kwemakomputa pasirese), Mutongi anga ari mutungamiri mukushambadzira kwedigital / mashandiro enhau, ruzivo rwevashandisi uye dhizaini yewebhu uye budiriro anopfuura makore gumi.
Yemagariro Vatengi Sevhisi yeMarketeers
GoAnimate Inowedzera Enterprise, Whiteboard, uye Infographic Vhidhiyo Zvimiro